ကြှနျတျောသီသော ကဗြာလေးမြား: April 2013
ချစ်ခဲ့ ခင်ခဲ့ ကစားခဲ့ကြတဲ့ သူ .....
သောက်ရင်း စားရင်း ပျော်ရင်း ပါးရင်း
အဆိုးအကောင်း အထွေထွေ ကို
တစ် ယောက်ထဲသော သူ .....
ခေါ် ခေါ် ဆောင်ကာ သွားလေပြီ ....
ငါ ဆို တဲ့ ငါ က တော့ လေ
အရက်ပုလင်း ရယ် အရက်ခွက်နဲ့
ဘယ် ညာ ပင် ပြောင်းကာ ကိုင်လို့
ငါ့ ဘေး မှာ မင်း က ထိုင်
ဟော ဒီလို့ ငှဲ့ ရော မင်း က တစ်ခွက်
ငါ တလှည့်နဲ့ အားရအောင်သောက်
ရီ ဝေ ဝေ အမူးတွေ ရောက်မှ
ဩော် ပထမ ပါတဲ့ သူငယ်ချင်း
ငါ ရ တဲ့ ဆုငွေ ရယ် မင်းအတွက်ကို
ကောင်းမှုတွေလုပ်လို့ အမျှ အမျှ အမျှ
သာဓုခေါ်ပါ သူငယ်ချင်းရယ် ^!^ ^!^
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 8:56 AM No comments:
မောင် ရေ အား ငယ် သ လား
နား လည် ထား လို့ မ ငို နဲ့ နော် ကွယ်
ငြိုးကာနေလို့ လွမ်းနေမိတယ် မောင် ♥
လွမ်းတေးဆိုကာ ငိုငြီးဘူးတယ် မောင် ♥
မောင် တစ်ယောက်ရော သိပါလေသလား
ထား ခဲ့ မိ တဲ့ ကျွန် မ က လေ
မောင် တစ်ယောက်တော့ အစဉ်တွေများ
ပြေပါမလားလို့ တွေးနေမိတယ် မောင် ♥
ဟို ယ ခင် နှစ် ကိုယ် ကြင် စဉ် က
အ မှတ် တ ရ လေး တွေ ကို တော့
သ တိ ရ လို့ လွမ်း မိ သေး တာ
အ မှန် ပါ ပဲ ချစ် ရ သော မောင် ရယ် ♥ ♥ ♥
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 8:40 AM No comments:
ချစ် တယ် လို့ ကွယ် မောင် က ဆို
ရှက် နေ မှာ လား ပျို ♥♥♥
တ မာ တွေ ချို ကောင်း ကင် ပြို
အီ ကွေ တာ မှ လ မင်း ထွက်
မင်း ကိုယ် မုန်း မယ် တစ် သက် ♥♥♥
မ ခွဲ ဘူး ဆို ယုံ ပါ ပျို
အ ရမ်း ချစ် တာ ကို
ချစ် တာ တွေ ကို စာ စီ ပြ
မောင့် ချစ် သူ လေး အ လှ
လှ တာ တွေ ကို ချ ကာ ရေး
ချစ် တယ် ကောင် မ လေး ♥♥♥
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 8:38 AM No comments:
သူ ငယ် ချင်း ရေ
မင်းတို့လို ငါ စာမတက်ပေမယ့်
ငါ မင်းအတွက်တော့ ကဗျာလေးစပ်မိတယ်
မပျက်ခဲ့ပါလား သူ ငယ် ချင်း ရာ .............
ကျွဲပါးစောင်းတီး အာဖျံ ရွှီးတွေက
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ သူ ငယ် ချင်း ရာ .......
မင်း လမ်းကို မင်း လျှောက်ရင်း
မင်း မှန်တာ မင်း လုပ်ခါ
သွေးရင်းသဖွယ် မင်း ထားခဲ့တာ
ငါ ထင်ပါတယ် သူ ငယ် ချင်း ရာ .....
မင်း ပျော်အောင်သာ နေလိုက်စမ်းပါ
ငါ သိပါတယ် သူ ငယ် ချင်း ရာ ....
မင်း ရဲ့အချစ် မင်း ရဲ့မေတ္တာ
မင်း ရဲ့သစ္စာ မင်း ရဲ့ အကြင်နာတွေကိုမှ
ပူတယ်လို့ သူ ထင်နေတာများလား
မင်း အတွက်နဲ့ စကားလေးတွေ
ပြောလိုက်ချင်တယ် မင်း စိတ်မဆိုးနဲ့နော်
သွားကြရင်ဖြင့် ဩော် ငြူစူကာလေ
အသိခေါက်ခဲ့ သူ အဝင်မနက်ပါစေနဲ့လို့
ငါ လေ မင်း အတွက် ပြောပေးရင်း
မင်း အတွက်တော့ ကဗျာတစ်ပုဒ်
ငါ စပ် လို့ မ ပြီး သေး ပါ တစ် ကား
လှိုင်မင်း ဆိုတဲ့ သူ ငယ် ချင်း ရာ ..................
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 8:34 AM No comments:
ဂေါ် သ ဇင် လို တော် မ ဝင် သူ ရယ်
အ ကြွေ ပန်း ဆို ပေ မယ့် လည်း
ရွှေ နန်း တော့ ထိုက် ချင် ပါ ရဲ့
ပွဲ မ ဝင် ခင် ပ ဏ္ဍာ တင့် ရ အောင်
လက် တွဲ လို့ ခေါ် ခေါ် လေ သူ ကို မှ
ပူ ပူ တယ် လေ နင် ထင် မှတ် ကာ
လမ်း ခွဲ မယ် ကြံ မုန်း စိတ် ထန် လို့
ဓါး ထက် ထက် နဲ့ ရင် ကိုယ် ခွဲ
မင်း ပျော် ပါ ရဲ့ လား ကွယ် .......
ကျွမ်း မျက် ရှ အ ယူ တွေ တိမ်း ကာ ပ
လွမ်း လက် စ အ ပူ တွေ မ ငြိမ်း လည်း
မ နာ ရက် သေး ဘူး အ ချစ် ဦး ရေ
ရင် ထဲ သို့ စူး ဒီ ကောင် ရူး အုံး
တွယ် တာ မက် မက် အ ဖယ် ခက် တော့
နင့် အ ပြုံး ထေ့ ထေ့ ငြိုး မယ့် တ နေ့
တစ် ကယ် လို့ များ ရောက် လာ ခဲ့ ရင်
မာ ယာ တွေ ကို နင် ခ ဝါ ချ ပါ လား
အ ပျော် ဆို တာ အ ဖော် ဖြစ် ပေ မယ့်
မ တော် လို့ များ လမ်း မှား သွား ရင်
မေ တ္တာ အ ဆင်း ငါ ချစ် ခြင်း တွေ
နင့် အ ပေါ် မှာ ကို မ ဆူး စေ ရေး
ဆု အ ကြိမ် အ ကြိမ် ပေး လို့
မ နေ တက် ပေ မယ့် နင် ကျေ နပ် အောင်
နေ ပေး ပါ မယ် ဩော် မ နမ်း ထိုက် တဲ့
ပန်း အ မိုက် မ လေး ရယ် ..................
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 8:32 AM No comments:
ထုံ အ ဆင့် ငုံ လို့ ပင် ပွင့် ပေါ့
အ ပွင့် ရယ် ဖြူ ညှာ တံ ရယ် စိမ်း
ဆပ် သွား ဖူး ပင် ချုံ နံ ဘေး
လှိုင် လို့ ပင် ဖွေး သူ့ ရ နံ့ လည်း မွှေး
မွှေး နိင် လွန်း တဲ့ ဒီ ပန်း ငယ်
ချစ် သူ မောင် က ခူး ခဲ့ မယ်
ချစ် ကေ သာ ဆံ နွယ် ဘေး
ပန် ဆင် ပါ တော့ လေး
တစ် ပွင့် စံ ပယ် အေး ♥♥♥
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 8:30 AM No comments:
ခု လုပ် ထိ မှ အ မိ တ
သား နောင် တ တော့ မ ရ ပါ ဘူး မေမေသား ရွေး ချယ် ခဲ့ တဲ့ လမ်း ပဲ မို့
သား ပါ သာ ရင် စည်း ကာ ခံ မယ်
မေမေ ပြော တယ် ခဲ့ နော်
အမေ သမီးပုံ ပြစဉ်တုန်းက
သမီး အိမ် သို့ နား ဖောက် ဆို့ လား
မေမေ စကား နား ဝ မှာ ကြား
သား ပျော် လိုက် တာ များ
ခု များ ဆို အ စဉ် ဝေး တော့ မှာ လား
သား မ သိ မ သိ တော့ ဘူး မေမေ
ဘ ဝ အ ဖော် ဖြစ် လေ ရယ် ဆို ပြီး
ချစ် ခဲ့ တဲ့ အမေ သမီး က
ခ ဏ အပျော် ပါ ဆို ပြီး ပြော မဲ့ ရက်
မေမေ ရင် ခွင် မှာ ပါး ကို အပ်လို့
အား ရ အောင် ငို ဖို့ ရယ်
အမေ့ သား မောင် ပြန် လာ ပါတော့ မယ် ........
အ ပျော် မ ချစ် အ ဖော် အ ဖြစ် ဆို ပြီး
သ ကာ အချစ် အ ကာ အချစ် တွေနဲ့
လှော် လို့ ပင် ချစ် သွား တာ ပ
ရေ မြေ ရယ် တစ် ကယ် ခြား
မ ခွဲ ဘူး ဆို ယုံ သော် ညှား လည်း
အ ကာ မှ အ နှစ် မ ဖြစ် တော့ ရင်
မာ ယာ တွေ အ ဆင် လွှာ ချ ပါ တော့
ရင် တွင်း က ဝေ ဒ နာ တွေ ကို
ခြေ ရာ ပင် နင် မ ချန် ပါ နဲ့
ပိုး ကိုက် တဲ့ ပန်း နှင့် မ ခြား
အ ဖိုး ထိုက် အောင် နမ်း ပေ မယ့်
သွား ဆို မှ သွား ဩော် ခက် ပါ လား
စိတ် မ နာ ပါ နင် နှင် ရက် တော့
နင် ကိုယ် တိုင် ရွေး ချယ် ရက် တာ မို့
နန်း ထိုက် လို့ တော် မ ဝင် သူ ရယ်
နင့် အဖြစ်ကိုတော့ ငါ ရင် လေး လို့
သ နား နေ မိ တော့ တယ် ကွယ်
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 8:50 AM No comments:
အကို တွေးလို့ ပြောမှဖြစ်မည်
ပြောတော့မည် ဂျင် မ လေး ရေ .....
အလိမ္မာ စာမှရှိ နင် မလိမ္မာတာ
အ ခါ ခါ သိ ပေ မယ် လို့
ဘာ ကြောင့် မ ပြင် သ လည်း
အ မျိုး ကောင်း သ မီး ပေ မို့
လောကကြီးကို အရွဲတိုက်တာလားဟာ ....
မိန်း က လေး တို့ ရဲ့ အ သက်
အ ရှက် ဆို တာ သိ လို့
ပိုး သား လို ဥ ယု ယ လို့ ထွေး
ဥယျဉ်မှုးလို့ ပျိုးနေတာပါ လေ
ကိုယ် ဝမ်း နာ ကိုယ် သာ သိ
နင် ဘေး မှာ တ နှာ ကောင်တွေ ဝိုင်း
အ များ တစ်ကာရဲ့ အပြော အကြည့်
အကို ရင်မချီ တာတော့ ရင်ထဲက
စေ တ နာ ဆ န္ဒ အ မှန် ပါ လေ
ခု လုပ် ထိ မှ အ မိ တ နှောင်းနောင်တလည်း
နောင် မှ မ ရ စေ ချင် ပါ ဘူး ကွယ်
ဟို ရှေ့ မှာ လေ အ ကြင် နာ အိမ် လေး
နှ လုံး သား တံ တား ပါ ခင်း ထား တယ်
နင် မြင် အောင် ကြည့် ကြည့် စမ်း ပါ လေ
ကြင် နာ စွာ ပွေ ခိုင် မြဲ စွာ တွဲ
ကမ်း ထား တဲ့ လက် တစ် စုံ ကို တော့
နင် ငြို ငြင် စွာ ပုတ် မထုတ်လိုက်ပါနဲ့လား
ဂျင် ဆို သော ဂျင် မ လေး ရယ် ...............
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 8:49 AM No comments:
ကောင်း ကင် ကြီး လို မ မြင့် မား
ရေ မြေ တွေ လို မ ခန်း နား
ဘ ဝ သ မား မို့ ခ ဏ အ နား မှာ
မ နေ နိင် တော့ ထား ခဲ့ မယ် ပေါ့
ဆုံး သံ သ ရာ တစ် လျှောက် မှာ ဖြင့်
အ မုန်း ဖန် ရေ မင်း သောက် ခါ နေ လည်း
အ ရူံး များ နှင့် လူ နှ လုံး သား တွေ လှူ ရင်း
ပြုံး ကာ ပဲ နေ ပေး ပါ မယ် အ ချစ် ရယ်
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 8:48 AM No comments:
ရက်စက်ခွဲခွာ ထားခဲ့တာလား မောင် .....
မေ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ခုန်သံစည်းချက်
အရင်းအနှီးဆုံးများ မောင့် ဘေးထားကာ
မ ခွဲ ဘူး တူ နှစ် ကိုယ်
သစ္စာတွေဆို အ ချစ် ပို.....
စိမ်းရက်တာလား မေ့ သခင်ရယ် ......
ပေါ် ပေါ်လာသေး မျက်နှာလေးက
စိတ် တွေ တောင် ထွေ ကာ သွား လို့
လွမ်း လွမ်း တဲ့ အ သည်း တွေ က
ကျွမ်း ကျွမ်း မြေ့ ကာ သွား တော့
မေ့ မေ့ မ ရ ပါ လား မောင် ရယ် ........
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 8:47 AM No comments:
good morning my love ဆိုပြီး
အခါခါ ဆက်သချင်သူရယ် ပါလေ ......
ဘဝနှင့်အသက်ကို ပုံ ချစ်ယုံအောင်လည်း
ချစ် ရှေ့မှာ အကြိမ်ကြိမ် ခယလို့
ဒူးထောက်ပေါင်းလည်း များပါပြီ ......
ချစ်သူအကြောင်း က မှ အ အဆုံး
အသိဆုံးဟာ မောင် သာပဲမို့
ချစ် ဘာ လုပ် လုပ် အ ဟုတ် ထင်
အ ပြစ် ဆို တာ လည်း မ တင်
အ မုန်း ဆို တာ လည်း မဝင်ခဲ့ပါပဲ
ဘယ် အ ငြိုး ရယ် ကြောင့် များ
ရက် စက် စိမ်း ကား နေ နိင် အား လည်း
မ ခွဲ ဘူး ဆို တဲ့ ချစ် သဲ ရယ် ♥♥
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 8:46 AM No comments:
ဓါတုနှမ အ မျက် ရှ ခါ
ပို့နေပါသလား မ ဖု ရား ရယ် ......
ရိုမီယို ဂျုးလီယက် မခြား စန္ဒကိန္ဒရီတွေအလား
ချစ် လိုက် ကြ တာ တ အား ပေါ့
မကြင်ဘက်အတွက် တိမ်း ကာ ပ
သခင်ရက်စက် စိမ်းတာလည်းကွယ် .....
ထားရာနေ စေရာသွား အဖြည့်ခံလူသားကိုမှ
ကံကြမ္မာဒဏ်သင့်ခါ ဩော် အပယ်ခံမခြား
ကိုယ် ထိုက် နဲ့ ကိုယ် ကံ ရင်စီးကာခံလို့
ခု များ ဆို အ စဉ် ဝေး ပြီ မို့
ဒီ ရင် မှာ ဝေဒနာ ဗလာပွနဲ့
တစ် ယောက် ထဲ သာ သွား တော့ မည်
အချစ် အမုန်း မ ရှိ လေ သော
သီ ခြား က မ္ဘာ ဆီ !!!!!!!!!
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 8:43 AM No comments:
လှမ်း လှမ်း ၍ လျှောက် လို့ သွား
သူ မ ပါ တော့ တဲ့ ခြေ ရာ များ
အ ချစ် ရေ .........
မြင် မြင် ပါ ရဲ့ လား ~~~~~~
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 8:42 AM No comments:
မြင်ပါရဲ့လား ချစ်ရသော မေ ....
မေ က မ မြင် မေ က မ သိ
မသိ မသိ ခဲ့ပါဘူးကွယ် .....
ခဏအပျော် ချစ်ခဲ့တာလား မေ
စကား စကား တွေနဲ့ရယ်
ထား ထား ခဲ့တာလား ကွယ် ....
မေ့လိုက်ပါတဲ့ မေ့ ရဲ့စကား
မခွဲ မခွဲ ဆိုတဲ့ ကတိတွေက
အ မှတ် တ ရ လေး တွေ က များ
ဩော် မေ့ မေ့ မရပါလား ကွယ် .....
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 8:37 AM No comments:
တစ်ကယ် တစ်ကယ် များ ဝေးကြရရင်
တစ်ခုလေးပဲ မောင် တောင်းဆိုမိမယ်
ဒီ သံသရာ ဘုံတစ်ကွေမှာ
မပျယ်သော သစ္စာ တွေနဲ့
ယုံကြည်ထားပါ ချစ်သူရယ် ♥♥♥
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 10:11 AM No comments:
ပွင့်ရှာလေတော့ ပန်းများရယ် ဝါ
မွှေးရနံ့က တသွင်သွင် ကြည့်စမ်းပါ ခင် .....
မြင် သူတွေ ငေး တွေ့သမျှ မေ့
ဝေး သူလည်းလွမ်း ထိသမျှပင်လန်းတဲ့
မောင် မမေ့ဘူးကွဲ့ ညတစ်ည
မောင် ကိုယ်တိုင် ခူးလာခဲ့
ပိတောက်ဖူး ချစ် အတွက်ရည်စူး
ချစ်သူ အပြုံး ဖိုး ရွှေ လ တောင် ရူံး .....
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 10:10 AM No comments:
"ငါ" အနားကနေ သွားတော့မှာပေါ့
"ငါ" အပြစ်ဆိုတာ မမြင်ခဲ့ပါဘူး
"ငါ" ဆိုတဲ့ကောင်က "နင့်"အတွက်
နေပေးခဲ့တာ "နင့်"ကို အရမ်းချစ်လိုပါ
"ငါ"ကလည်း "နင့်" လိုလူသားပါ
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 10:09 AM No comments:
ချစ်တယ်ချစ်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလေးတွေ
ရွာ ရွာ မချပါနဲ့လား
"နင့်"ကိုယ် "ငါ" အရမ်းချစ်တယ်
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 10:08 AM No comments:
အ မှတ် တ ရ တွေ ရယ် များ
မေ့ ရ တော့ မှာ ပါ တ ကား ^!^ ^!^
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 10:07 AM No comments:
ကြာဖြူ ကြာနီ ♥ သဇင် ဇလပ်
မုလေး ခတ္တာ ♥ ဒေါန စံပယ်
ဆတ်သဖူး ပုန်းညှက် ♥ အင်ကြင်း ဂမုန်း
မောင့် ရဲ့အချစ် ထိုသို့ဖြစ်သည်
အယူအသိမှာ ချစ် ရှိတာမို့
ချစ်သဲတစ်သက် ပျော်စေသော် ♥♥♥
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 10:06 AM No comments:
အသိ သစ္စာ အချစ် မေတ္တာတွေနဲ့
ချစ်နေမိသူက မောင် ရယ်ပါလေ
မောင့် ရင်တွင်းမှ တေးဆိုသောငှက်က
အိပ် ပျက် ရက် ရှည် ကြာ ခဲ့ ပြီ လေ .
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 10:05 AM No comments:
♥ ချစ်သူရေ ♥
ငါ ဆိုတဲ့ မောင် က ဖုန်းခဏခဏဆက်တာ
ငါ ဆိုတဲ့ မောင် က ချစ်သူ wall မှာ
ငါ ဆိုတဲ့ မောင် က ချစ်သူကဗျာပိုစ်တွေ့မှာ
like လုပ်တာတွေ comment ပေးတာတွေက
ငါ ဆိုတဲ့ မောင် က ချစ်သူ page မှာ
ငါ ဆိုတဲ့ မောင် က ချစ်သူတင်သမျှ
ငါ ဆိုတဲ့ မောင် က ချစ်သူကိုချစ်သူပါလို့
မောင့် ချစ်သူကို ကာကွယ်ခြင်တာလေ...
ငါ ဆိုတဲ့ မောင် က မရေရာခြင်းတွေများလို့
ချစ်သူအိမ်အရောက် မောင် နားဖောက်မယ်
ဝင်ကြည့်စမ်းပါ အချစ်ရယ် ♥♥♥
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 10:03 AM No comments:
ငါ လည်းပါဝင်ကာ ကလောင်တိုင်ကိုင်ရင်း
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 10:02 AM No comments:
တစ် ယောက် ထဲ အတွက်
စိတ်ကောက်တာတွေ ပြေ ပြေ မလားရယ်လို့
ဝေ ဝေ သောရွက်တို့ ကြွေသောနွေမှာ
ပူ ပူ တယ်လေ ဆယ်နွေကဲတာမို့
လ မင်း လို လင်း မဲ့ သူ ရဲ့
ဒီ နေ့ လည်း စိတ် ညစ် တယ် :'( :'( :'(
မောင့် ဘဝရဲ့ အဖော်ပါကွယ်
မောင့် ရင်မှာ မခန်းခြောက်နိင်တာမို့
နေ မင်း လို့ ရင် မှာ ရှိ သူ ရဲ့
ဒီ နေ လည်း စိတ် ညစ် တယ် :'( :'( :'(
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 9:44 AM No comments:
ချစ် ကိုယ်ချစ်တဲ့ မေတ္တာများနဲ့
မောင့် နှလုံးသားမှာ ပန်းကမ္ဘာလေးအလား
ကြာ ပြီ လေ ကွယ် ချစ် သူ ရယ် ♥♥♥
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 9:43 AM No comments:
လေးနှမငယ်တို့ က မြဲ က ရင်း
စိုးရိမ်မိတယ် ညီမလေးတို့ရယ် ...................
သင်္ကြန်အတွက် ညီမငယ်လေးများအား ရည်ရွယ်၍
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 9:38 AM No comments:
အတူမျှကာ ယူမယ်ဆိုတဲ့ မောင့်ချစ်သူရေ
အသွား အပြန်တွေ ရှိတယ်တဲ့လား
ဖြေသာမယ်လို့ မောင်ကထင် ................
ဘေးကိုထားလို့ ချစ် ဘာလုပ်လုပ်
အဟုတ်တွေထင် အပြစ်တွေပင် တင်ဖူးလား?
မာန်ရှသလို့ ခံရတဲ့ကောင် ဒီ မောင်
မြဲဖြေကြားမို့ ခံရတဲ့ကောင် ဒီ မောင်
အတွေးပင်ပျောက်လို့ ခံရတဲ့ကောင် ဒီ မောင်
ချစ်လေး ချစ်ဆုံး တွင်တွင်သုံး၍
ခေါ်ပင် ခေါ်ညား ခေါ်နေသားလည်း
ငိုရတဲ့ကောင် ဒီ မောင်
စိန် ရွှေ ကျောက်များ ဈေးပင်ဖြတ်ထား
မောင့် မေတ္တာတော့ ဈေးမဖြတ်နဲ့
ချစ် တစ်ယောက်ထဲကို ချစ်မိတာက
ဆွယ် တော် ရွက် နှင့် မခြားပါကွယ်
ပေးဆပ်ထားသူက မောင် ရယ် ပါ လေ
မောင့် မေတ္တာတွေ ပေးပါပေမယ့်
လှမ်း လှမ်း ၍ ကမ္ဘာတွေ က ခြား
အချစ်ရေ ပျော် ပျော် ရွှင်ပါစေသား ကွယ်
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 9:36 AM No comments:
ဥမ္မာဒါနီ ရယ် ပပဝတီ အလား
မောင့်ချစ်သူက ပိုလှတယ် ........
အမရာ ကိန္ဒရီ မဒီ သမ္မူလ မခြား
ဆင်းလှတော်ဝင် မောင့် သခင်ကရော
မခို့တရို့အပြုံး မိုနာလီဇာတောင်ရူံး ......
ဒီ ကမ္ဘာမှာ အလှ ဆုံး ပေါ့ ................
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 9:34 AM No comments:
ချစ်တာကိုများ အပြစ်မဆိုနဲ့လား ............
မုန်း မေ့ မဲ့ မောင် ပါ ပဲ လို့
မောင် မင်း ကို အ ရမ်း ချစ် တယ်
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 9:32 AM No comments:
ဖြုလဲ့ ဖြူမွှေး ပွင့်လွှာ ဖွေးဥ
လွန်ပျိုမျစ်သော မောင့်အချစ် ♥
ထွန်းလင်းကြွယ်နု ရွှေစင်ဥသို့ 
မြမြိတ်စို့ နှင့် ပျိုမျစ်တင့်တယ်
အလှကြွယ်သော မောင့် အချစ် ♥
မောင့် ရဲ့ အချစ် သစ္စာဖြစ်သော်
ဆင်းလှတော်ဝင် မောင့် သခင်မှ
မောင့် အကြင်နာ မဖုရားရယ် ♥♥♥
အသက်တစ်မျှ ချစ်ရသောချစ်သူ သိပါစေ
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 9:22 AM No comments:
ဘယ်တော့များမှ လည်း ?
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 9:21 AM No comments:
အချစ်ကြီး ချစ်ခဲ့မိပါဤ ....
မင်း ခွဲမသွားပါနဲ့နော် .....
မဟုတ်ခဲ့ ပါဘူး မောင့် ချစ်ဦးရယ်
မင်းကို ချစ်တဲ့ အချစ်တွေ
မင်းကို ပေးတဲ့ မေတ္တာတွေ
မင်း မြင်တဲ့ တစ်နေ့
မောင့် ရင် ခွင် တံ ခါး
မင်း ကို အရမ်း ချစ်လို့ ပါ
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 9:20 AM No comments:
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 9:19 AM No comments:
ဩော် အချစ်ရေ ......
ဘဝတွေကခြား မေ့ အပါးမှာပဲ
သေပါရစေတော့ လား !!!!!!!!!
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 9:18 AM No comments:
ဩော် သူ မသိပြန် ...
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 9:13 AM No comments:
မေ့ ဆံနွယ်မှာ မျက်နှာအပ်လို့
မောင့် ဘဝမှာတော့ ခြေရာထင်
မောင့် စိတ်ကို မောင်ဖြေကာ
မောင့် ရင်မှာ အလွမ်းမျက်ရည်
♥ အချစ်ရယ် ♥
ဒီဘဝမှာ မောင် ကတော့ရူး @@@
Posted by ခဈြရသူလှိုငျမငျး at 9:10 AM No comments: